यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय भरतपुरले गतबर्षको तुलनामा यसबर्ष राजश्व संकलनमा वृद्धी : लाइसेन्स नविकरण नहुदा विरगञ्ज, वुटवल र काठमाडौं धाउनुपर्ने बाध्यता ? – Halkaro
यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय भरतपुरले गतबर्षको तुलनामा यसबर्ष राजश्व संकलनमा वृद्धी : लाइसेन्स नविकरण नहुदा विरगञ्ज, वुटवल र काठमाडौं धाउनुपर्ने बाध्यता ?
प्रकाशित मिति : २०७५, ३१ बैशाख सोमबार May 15, 2018
चितवन,यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय भरतपुरले चालु आर्थिक बर्षको नौं महिनामा ३६ करोड बढी राजश्व संकलन गरेको छ । कार्यालयले सवारी कर ,नविकरण,जँचपास,रुट परमिट नविकरण लगायतका शिर्षकमा राजश्व संकलन गरेको हो । जसमध्ये सवारी करतर्फ ३० करोड ४५ लाख १८ हजार ३ सय ३ रुपैया,आयकर तर्फ १ करोड पाच लाख १४ हजार ८ सय १० रुपैंया, सवारी दस्तुरतर्फ १ करोड ३६ लाख ६३ हजार ७ सय ५१ रुपैंया र रुट परमिटबाट ४ करोड ५ लाख ४४ हजार ५ सय ६० रुपैंया संकलन गरिएको छ ।
गतबर्षको तुलनामा यसबर्ष राजश्व संकलनमा वृद्धी भएको कार्यालयका प्रमुख देवी प्रसाद आचार्यले बताए । उनले कार्यालयमा बर्षेनी सेवाग्राहीको चाप बढ्दै गएको जानकारी दिए । कार्यालयले आर्थिक बर्ष २०७२ ÷ ७३ मा २९ करोड राजश्व संकलन गरेको थियो भने ७३ ÷ ७४ मा ३६ करोड ६२ लाख राजश्व संकलन गरेको थियो । गतबर्ष संकलन गरिएको राजश्व यसबर्ष नौं महिनाको अवधीमा नै संकलन गरिएको छ । यसवर्ष करिव ४५ करोड राजश्व संकलन हुने कार्यालयको अनुमान छ । कार्यालयले बार्षिक करोडौं राजश्व संकलन गरे पनि भाडाको घरबाट सेवा प्रदान गर्नुपर्ने बाध्यता भएको प्रमुख आचार्यले गुनासो गरे । कर्मचारीको अभावमा सेवा प्रवाहमा समस्या भएको भन्दै उनले दरबन्दी अनुसारको कर्मचारी नभएको बताए । बर्षैदेखी आफनै कार्यालय स्थापना गर्ने प्रयास भएपनी सार्थकता पाउन नसकेको आचार्यको भनाई छ ।
सवारी साधनको अत्याधिक चाप र नेपालको केन्द्रभागमा रहेकाले पनि यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय भरतपुरमा सेवाग्राहीको चाप बढी हुने गरेको कार्यालयका सहयोगी इन्द्र गुरुङले बताए । उनले कर्मचारी कम भएपनि कार्यालयको सेवा प्रबाहमा कुनै कमी आउन नदिएको दावी गरे ।सवारी कर र नविकरण गर्दे आइरहेको कार्यालयबाट लाइसेन्स नविकरणको पनि व्यवस्था हुनुपर्ने माग उठ्दै आएको छ । तर सरकारी निकायको व्यवस्थाका कारण लाइसेन्स नविकरणका लागी विरगन्ज, वुटवल र काठमाडौं धाउनुपर्ने बाध्यता छ । जनताको काम गर्नका लागी गाउगाउमा स्थानिय सरकार बनेका बेला लाइसेन्स नविकरणको व्यवस्था पनि चितवनमेै हुनुपर्ने माग उठ्दै आएको छ ।
← बाढीले चार घर पुरिए, सडक अवरूद्ध
अाजदेखि प्रदेश नं ५ को प्रदेशसभाको दोस्रो अधिवेशन →
रसुवागढी-काठमाडौँ रेलमार्गः निर्माण साढे दुर्इ खर्ब, ९ वर्ष लाग्ने
पूर्वराजदुत झाको हत्यासँग तरार्इ कनेक्सन खोज्दै प्रहरी
कार्यदललाई प्रतिवेदन बुझाउने समय पुनः थप
फुजेल काण्डः कृष्णप्रसादका दाजु नुरप्रसाद अदालतमा हाजिर नभएपछि फेरी सर्यो मुद्दाको पेशी
ट्रकको ठक्करबाट दुई पैदलयात्रुको मृत्यु